छालालाई उज्यालो पार्न महले कसरी मद्दत गर्दछ? - PAMPEREDPEOPLENY.COM - सुन्दरता
छालालाई उज्यालो पार्न महले कसरी मद्दत गर्दछ?
घर सुन्दरता छाला हेरचाह छाला हेरचाह oi-Amrutha नायर द्वारा अमी सेप्टेम्बर १,, २०१। मा अनुहार सफा गर्नेको रूपमा मह | छालामा मह प्रयोग गर्ने सही तरीका। DIY | बोल्डस्की
मह सबै घरमा पाइने साधारण तत्त्व हो र यसका अन्य धेरै सुविधाहरू छन्। कसरी यसले खानालाई मीठो बनाउँदछ, महको स्वास्थ्य र सौन्दर्यको लागि अन्य धेरै फाइदाहरू छन्।
महले छालामा अविश्वसनीयसँग राम्रो काम गर्दछ। एन्टीआक्सीडन्टहरूले छालामा बुढेसकाल हुने लक्षणहरूमा ढिलाइ गर्न प्रमुख भूमिका खेल्छन्। महमा एन्टीआक्सीडन्टहरू हुन्छन् जसले छालालाई उज्यालो पार्दछ, यसैले यसलाई जवान र सुन्दर राख्छ। यसले तन र दाग हटाएर छालाको रंग सुधार गर्न पनि मद्दत गर्दछ।
तपाईं छालालाई उज्यालो पार्न र अन्य छाला सम्बन्धी मुद्दाहरूको समाधानको लागि मह प्रयोग गरेर बिभिन्न प्याक र मास्कहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए हामी पत्ता लगाउँदछौं कि हामी कसरी दैनिक छाला हेरचाहको तालिकामा मह प्रयोग गर्न सक्छौं।
हल्का छालाका लागि मह
महमा यस्तो गुणहरू हुन्छन् जसले मृत छाला कोषहरू हटाउँन र छाला उज्यालो पार्न मद्दत गर्दछ।
मह र टमाटर
१ चम्मच मह
एक प्यूरी बनाउन सानो टमाटर ब्लेन्ड गर्नुहोस्। १ चम्चा कच्चा मह जोड्नुहोस्। दुबै सामग्रीहरू राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस् र तपाईंको अनुहारमा समान रूपमा लागू गर्नुहोस्। २० मिनेट कुर्नुहोस्। यसलाई सामान्य पानीमा धुनुहोस्। छालाको उज्यालोका साथ यो प्याकले तपाईंलाई ट्यान र दाग हटाउन मद्दत गर्दछ।
मह र निम्बू
१ चम्चा मह
दुई भागमा कागती काट्नुहोस्। निम्बूमा १ चम्चा मह मह थप्नुहोस् र तपाईंको अनुहारभरि यसलाई रगड्नुहोस्। यसलाई minutes मिनेटसम्म रहन दिनुहोस् र यसलाई गुनगुनाएको पानीमा धुनुहोस्। वैकल्पिक रूपमा, तपाईं एक साथ निम्बू को रस र मह सँगै मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई आफ्नो अनुहारमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ
एक Moisturizer रूपमा हनी
महले छालालाई गहिराइमा नमी तुल्याउन मद्दत गर्दछ। यसले छाला सफा र नरम राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
१ चम्चा मह खाएर यसलाई तपाईंको अनुहारमा लगाउनुहोस्। यसलाई १-20-२० मिनेटसम्म रहन दिनुहोस्। २० मिनेट पछि, यसलाई चिसो पानीले कुल्ला। तपाईं प्रत्येक दिन यो गर्न सक्नुहुन्छ, सुत्नु भन्दा पहिले।
झिink्गाको उपचार गर्न मह
महमा एन्टीआक्सीडन्टहरू हुन्छन् जसले छालालाई हाइड्रेटेड राख्न र छालाको बढ्दो लक्षणहरू ढिलाइ गर्नमा मद्दत गर्दछ। यहाँ एक सरल एंटी-एजिंग मास्क छ जुन तपाईं घरमा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
कसरी घरमा कमल रोप्ने
१ चम्मच पपीता
१ चम्मच दूध
१ चम्चा दही
बाक्लो पेस्ट बनाउनका लागि पपीया म्यास गर्नुहोस्। एक भाँडामा माथिको माथि उल्लेखित सामग्री थप्नुहोस् र तिनीहरूलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। यस मास्कलाई सफा अनुहारमा लगाउनुहोस् र हल्का रूपमा मसाज गर्नुहोस्। 30० मिनेटको लागि मिश्रण छोड्नुहोस् र यो गुनगुना पानीमा धुनुहोस्। छिटो परिणामका लागि तपाई हप्तामा एक पटक यो उपचार दोहोर्याउन सक्नुहुन्छ।
एक Exfoliator को रूपमा हनी
महले मृत कोशिका हटाउन र छालालाई एक्फोलीएट गर्न मद्दत गर्दछ यदि नियमित रूपमा प्रयोग गरियो भने। यो स्क्रब छालाको रंग सुधार गर्न मद्दत गर्दछ।
१ चम्मच बेकिंग सोडा
आफनो मुख धोउ। १ चम्चा मह र बेकिंग सोडासँगै मिक्स गर्नुहोस्। यो मिश्रण तपाइँको अनुहारमा हल्का रूपमा गोलाकार गतिमा स्क्रब गर्नुहोस्। यसलाई १०-१-15 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। पछि यसलाई सादा पानीमा धुनुहोस्।
हनी दाग ​​को उपचार गर्न
महले दागहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ किनभने यसमा एन्टिऑक्सिडन्टहरू छन्। साथै, यो एन्टिसेप्टिक मानिन्छ। तल सजिलै गरी दिइएको उपचार प्रयोग गरी तपाईले छालामा कुनै दाग सजिलै हलुका गर्न सक्नुहुन्छ।
१ चम्मच नारियल तेल
दुबै सामग्रीहरू सँगै मिलाउनुहोस्। यस मिश्रणलाई प्रभावित क्षेत्रमा लागू गर्नुहोस्। २- minutes मिनेटका लागि तपाईको हातले हँसिलो मालिश गर्नुहोस्। यसको माथि तातो कपडा राख्नुहोस् र यो शान्त नभएसम्म कुर्नुहोस्। तपाईं यो उपचार दिनदिनै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, दागहरू चाँडोबाट छुटकारा पाउनको लागि।
एक्नीबाट छुटकारा पाउन मह
महमा एन्टीफ्लमेन्टरी गुणहरू हुन्छन् जसले छालाको सतहबाट थप तेल हटाउँदछ। यसले एक्ने दागहरूबाट मुक्त हुन मद्दत गर्दछ।
एक्ने वा पिम्पल्समा केवल केही कच्चा मह लागू गर्नुहोस् र यसलाई १ 15 मिनेटको लागि छोड्नुहोस्। १ 15 मिनेट पछि, यसलाई तातो पानीमा पखाल्नुहोस् र सुख्खा सुकाउनुहोस्। हरेक दिन यो एकचोटि दोहोर्याउनुहोस्।
मेरो प्रेम को लागी नयाँ साल चित्रहरु
के हुन्छ यदि हामी जिम जान छाड्यौं
के ढीला गति भारत मा खाने छ
छालाको लागि कोकम जूसका फाइदाहरू
कसरी महको साथ तौल घटाउने
कूलि न। १ मुख्य देखि रास्ट से
मेरो करी पात बोट बढेको छैन